प्रदीप र पूजाको फिल्म जुध्दै, बाजी कसले मार्ला ? « Ramailo छ
प्रदीप र पूजाको फिल्म जुध्दै, बाजी कसले मार्ला ?
‘प्रेम गीत’ जोडी प्रदीप खड्का र पूजा शर्मा अभिनित भिन्ना भिन्नै फिल्म एकै मितिमा लाग्ने भएका छन् । ‘रामकहानी’ लाग्ने मिति भदौ २२ मै फिल्म ‘रोजी’ले पनि प्रदर्शन मिति तोकेपछि पूजा र प्रदीपबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।
प्रदीपको ‘रोजी’ र पूजाको ‘रामकहानी’ एकसाथ प्रदर्शन हुने भएपछि फिल्म नगरीमा विभिन्न चर्चा सुरु हुन थालेको छ । एकै मितिमा दुई स्टारको फिल्म जुध्दा दर्शकले साथ कसलाई देलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उसो त प्रदीपको ‘रोजी’को कुनै पनि प्रचार सामग्री सार्वजनिक भएका छैनन् । गीत यो साता मात्रै सार्वजनिक हुँदैछ ।
पूजाको ‘रामकहानी’को गीत र प्रोमो सार्वजनिक भैसकेको छ, जसले एक खालको चर्चा पाइरहेको छ । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्ममा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ प्रेम जोडीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् भने केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई र रविन्द्र झा लगायत चर्चित हाँस्यव्यांग्य कलाकारको अभिनय छ ।
निरक पौडेल निर्देशित फिल्म ‘रोजी’मा भने प्रदीपसँगै पारमिता राज्यलक्ष्मी राणा, मिरुना मगर लगायतले अभिनय गरेका छन् । फिल्मलाई गोपिकृष्ण मुभिजले निर्माण गरेको हो । ‘रामकहानी’ र ‘रोजी’मा कसले मार्ला त बाजी ?